RC Cars maka Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 n'usoro 4WD Off Road abụọ kwadoro n'usoro tumbling - 2.4Ghz High Speed ​​Rock crawler Vehicle na nnukwu ọkụ Children Birthday Onyinye RC Car maka Kids - Jomo Technology Co., Ltd
RC Cars maka Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 n'usoro 4WD Off Road abụọ kwadoro n'usoro tumbling - 2.4Ghz High Speed ​​Rock crawler Vehicle na nnukwu ọkụ Children Birthday Onyinye RC Car maka Kids
1.High ọsọ na pụrụ n'ụzọ: The ụgbọ ala nwere ihe abụọ dị ike Motors na 4WD, hụ ya elu na-agba. Nnọọ mgbanwe wiil, ọ dị mfe na-eme ngwa ngwa ibe.
2.Best onyinye maka ụmụaka: na 2.4GHz radio ime akara usoro, RC ụgbọ ala bụ a zuru okè ụbọchị ọmụmụ, Christmas onyinye maka ụmụaka.
3.All iche iche nke aghụghọ: ịtụnanya 360 ogo stunt flipping imewe, adabara gị na na ma ọ bụ egwuregwu ụmụaka ụgbọala n'Anya. Ugboro abụọ n'akụkụ agba, na-atụ, backward, gaa aka ekpe, gbanwee nri, 360 ogo tumbling flipping. RC ụgbọ ala dị nnọọ na-aga, n'agbanyeghị ihe ọ akụrisị ma ọ bụ otú ọ na-ala, na-enye gị a dị iche iche dị mma ahụmahụ!
4.High quality ihe: elu-edu plastic, ike na inogide ụgbọ ala ahụ, ihe ruggedness na crashworthiness. The na taya na-mere nke roba, mfe ịkwụsị n'èzí ọnọdụ.
5.Guarantee: ụgbọala na-eji 3.7V 400mAh rechargeable batrị (gụnyere) na USB cable (gụnyere), 15 - 20 mins akpọ oge, 2 awa Nchaji oge. KOOWHEEL enye zuru nkwụghachi ma ọ bụ ịgbanwe ọhụrụ otu maka iji n'ime ụbọchị 30. Njikere omume na 24 hours.So tinye na ụgbọ ibu ugbu a!
Previous: RC Cars KOOWHEEL 1:16 n'ọtụtụ 2WD Off Road Remote Control Cars na 2 rechargeable Battery 2.4GHz Radio Remote Control Truck Monster High Speed ​​crawler USB chaja RC Car maka okenye na ụmụaka (Blue)
2.4G ime akara ụgbọ ala
2.4 GHz radio akara: ike mgbochi ndabichi nke nwee multiple ụgbọala ọduọ zukọrọ n'otu oge na ebe. Ọ bụrụ na ị na-2 ọzọ KOOWHEEL RC ụgbọala, ọ bụ ndị ọzọ fun na-agba ọsọ ọtụtụ ụgbọala akụkụ site n'akụkụ.
3 ihe mere n'okpuru maka mkpụmkpụ-akwọ ụgbọala oge nke batrị: The odori oge bụ mkpụmkpụ ịkwado a egwuregwu.
Radio ibe: 2.4GHz
Nchaji oge: 180mins
Battery ndụ: banyere 15mins
Control Anya: 100 ụkwụ
Car batrị: 3.6V 600mA batrị
Battery Ime akara: 2 * 1.5V AA batrị ( Ọ bụghị so)
ọrụ: Tụgharịanụ ekpe, gbanwee nri, n'ihu, azụ
ngwugwu akụkụ: 16.1 x 11 x 3.9 sentimita
Net ibu: 1.1 pound
Service na Akwụkwọ ikike:
12-ọnwa nnọchi akwụkwọ ikike, ndụ maka idozi.